Tower Transposition, Design Tower Tower, Tower Antenna finday - Tower XY
SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. （izay antsoina hoe XY Tower ina dia natsangana tamin'ny taona 2008.
Experience 20 taona niainana tamin'ny indostrian'ny herinaratra. ⦁ Miaraka amin'ny fitaovana famokarana mandroso sy ny rafitra fitantanana fampahalalana.
⦁Ny rafitra fitantanana Quality dia voamarina amin'ny ISO 9001: 2015, ISO 1461 na ASTMA123. ⦁ Ny mpiasa rehetra dia takiana andraikitra amin'ny fitantanana fifehezana kalitao.
⦁ Miaraka amin'ny serivisy ekipa efa za-draharaha ho an'ny mpanjifa manara-maso ⦁ Ny salan'asa iasana miasa dia 20 taona mahery ho an'ny ekipa mpitantana
⦁ Manamboara takelaka matanjaka. ⦁ Ataovy mampifandray an'izao tontolo izao. ⦁ Kalitao aloha, marin-toetra aloha.
Manomboka manangana ny tranobe sy ny birao vaovao
Sichuan XiangYue mpiorina tsipika herinaratra Cop. (XY Tower) dia naorina tamin'ny 2008. Amin'ny ezaky ny zavatra rehetra, ny com ...
Ny ekipan'ny lehiben'ny distrika dia mijery ny ozinina
XY Tower amin'ny maha-orinasa lehibe eto amin'ny distrikanay, ny lehiben'ny distrika dia manome lanja lehibe ary mitaky ...
Noho ny COVID-19, ny mpanjifanay dia tsy afaka tonga tany amin'ny ozinay mba hijerena ny tilikambo. Ny 9 novambra, mialoha ny de ...
Revenue vola miditra amin'ny varotra S20 tapitrisa miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 30.000 taonina ⦁ 10 andalana famokarana mandeha ho azy sy mpiasa 150 ⦁ Mihoatra ny 25 taona ny traikefa miasa amin'ny indostrian'ny angovo elektrika
MANOMBOKA DEIN ABENTEUER
Fotodrafitrasa XY Tower Ny fon'ny fotodrafitrasa rehetra dia ny fotodrafitrasa. XY Tower dia manana fahaizana apetraka hamokarana tilikambo 30.000 taonina isan-taona. Vonona ny XY Tower hihaona amin'ireo fenitra manara-penitra indrindra manerantany. Ny layout mahomby, ny fitaovana famokarana mekanika ary ny toerana fitehirizana lehibe ho an'ny vy dia manome vokatra kalitao XY Tower araky ny fepetra takin'ny mpanjifa henjana. Ny zavamaniry fanamboarana ao Chengdu dia natsangana tamina vongan-tany ...
Maninona ny fotodrafitrasan'ny XY Tower an'ny XY Tower ： Ny ivon'ny toerana fanamboarana rehetra dia ny fotodrafitrasa rehetra ao aminy. XY Tower dia manana fahaizana apetraka hamokarana tilikambo 30.000 taonina isan-taona. Vonona ny XY Tower hihaona amin'ireo fenitra manara-penitra indrindra manerantany. Ny layout mahomby, ny fitaovana famokarana mekanika ary ny toerana fitehirizana lehibe ho an'ny vy dia manome vokatra kalitao XY Tower araky ny fepetra takin'ny mpanjifa henjana. Ny zavamaniry fanamboarana ao Chengdu dia namboarina ...
● TOSIKARATRA ： 35kV ● Fitaovana ： Q255B / Q355B / Q420 ● Fampivoarana mafana ● Toy ny sary Manan-talenta amin'ny famolavolana sy ny famolavolana ny tilikambo fampitana izay mahomby amin'ny fanompoana ny indostrian'ny herinaratra isika. Ireo tilikambo fampitana ireo dia namboarina araka ny fepetra takiana amin'ny mpanjifanay ary iharan'ny fizahana kalitao henjana mba hiantohana ny lesoka aotra sy ny fiasan'ny optimum. ● 8000 Sq. Meters amin'ny atrikasa miaraka amin'ny vano. ● Loza fitehirizana saha sy packag ...
tilikambo mikraoba / radio fampielezana tilikambo vy
Ny tilikambo mikraoba dia antsoina koa hoe tranoben'ny fifandraisana microwave. Izy io dia tilikambo vy manohana antena parabola. Ampiasaina indrindra amin'ny rafitra elektronika amin'ny fandefasana microwave sy fandraisana. Amin'ny ankapobeny dia apetraka amin'ny tany somary avo izy io. Ny tilikambo mikraoba amin'ny ankapobeny dia rafitra vy. Ny tilikambo fifandraisana amin'ny microwave dia mihantona amin'ny alàlan'ny antennas (miendrika lovia) na antennas (miendrika tsorakazo), izay antsoina koa hoe tilikambon'ny fifandraisana. Microphone communica ...
Ny antony mahatonga ny XY Tower Towers dia tsy raisina ho vokatra fotsiny, fa koa serivisy. Avy amin'ny fiakarana, ny famoronana, ny fanangonana ny singa tsirairay ary ny fanaterana vokatra namboarina, XY Tower dia eo amina rojom-bidy iray manontolo. Manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny tetik'asa ho an'ny mpanjifanay ny injeniera amin'ny alàlan'ny famolavolana tilikambo voatily ary koa manome antoka ny maha-mety ny firafitry ny rafitra mba hialana amin'ny fanitsiana ny tranokala. ny famokarana manan-tsaina dia mihatra amin'ny zavamaniry eto amintsika. Ny fanaraha-maso ny zava-mahadomelina dia mahery ...
Rafitra fananganana herinaratra
Fitaovana vy & Fitaovana herinaratra elektrika